सफल कृषक Archives - krishipost.com – krishipost.com
व्यावसायिक किवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै डडेल्धुराका कृषक
२०७८ भदौ १९ गते १३:२२
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा डडेल्धुराका कृषक व्यावसायिक किवी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । केही वर्षअघि तरकारी उत्पादन हुने खेतमा आजभोलि भने कृषक किवीबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका हुन् । डडेल्धुरामा किवी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले कृषक यस पेसातर्फ आकर्षित हुन थालेका...
च्याउको बिउ बेचेर मासिक १ लाख ३० हजार आम्दानी !
२०७८ जेठ १२ गते १८:४८
काठमाडौ । सर्लाही वाग्मतीका एक युवाले च्याउको बीउ बेचेर मनग्य आम्दानी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका वाग्मती नगरपालिका वडा नं १० शङ्करपुरका ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले च्याउको बीउ उत्पादन गरेर नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले च्याउको बीउ बिक्री गरेर मासिक रु एक...
गोलभेंडामा लाग्ने पछौटे डढुवा -लेट ब्लाईट र त्यसको व्यवस्थापन
२०७७ पुष २० गते २०:११
देवासिष भण्डारी परिचय: गोलभेंडा सोलेनेसी परिवार अन्तर्गतको एक तरकारी बाली हो । यसलाई गरिबको स्याउको रुपमा पनि चिनिन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी, केही मात्रामा अन्य भिटामिन, काब्रोहाईडेड, प्रोटिन(प्रमुख खाधतत्व ) पाइन्छ । यो नेपालको उच्च पहाड, मध्य पहाड हुँदै तराई/बेँसीसम्म चैत्रदेखि कात्तिकसम्म...
किसानलाई टिप्स : आलु खेती र यसको तयारी
२०७७ असोज १९ गते १२:१२
आलुलाई तरकारीको राजा पनि भन्ने गरिन्छ । संसारका १ सय २५ भन्दा वढि देशमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ । अधिकांस देशहरुमा तरकारीका परिकारमा आलुको प्रयोग गरेको पाइन्छ । आलुलाई सर्वमान्य तरकारी वालीका रुपमा मात्र हैन यसका विभिन्न वहुआयमिक परिकारहरु बनाउन सकिन्छ । नेपालमा...
कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ ? सफल हुनका यसरी पाल्नुहोस ।
२०७७ असोज १८ गते १८:२१
पछिल्लो समय नेपालमा कुखुरा पालन व्यवसाय भरपर्दो पेशाको रुपमा विकास भरहेको छ । थोरै लगानी तथा सहि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने कुखरा पालनबाट पूर्ण रोजगारीका साथ मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । यून आय भएका अर्धबेरोजगार व्यक्तिका लागि थप आयआर्जन गर्न यो पेशा सहायक...
कसरी गर्न सकिन्छ गान्टे मुला खेती ? मनग्य कमाउने एक नेपाली किसानको कथा सहित
२०७७ असोज २ गते २२:३९
गान्टे मुला स्वास्थ्यका हिसाबले एकदमै राम्रो मानिन्छ । यसको खेती विश्वभर नै हुने गरेको छ । सुपरफुडको रुपमा मानिने यो फलको फाइदाहरु धेरै छन् । नेपालमै पनि यो फललाई लोकल कुखुराको मासुसंग मात्रै नभएर अन्य थुप्रै परिकारसंग मिसाएर खाने चलन छ । यो फलमा...
भैँसी पालेर मासिक दुई लाख कमाउन सफल किसान
२०७७ भदौ २९ गते १०:४६
विशाल पाण्डेय/कञ्चनपुर । हो है …काम पाइएन डिग्री पास गरेर भैंसी पाले गाउतिर झरेर चिन्ताछैन केहि मलाई अमेरिका यहीँ, मलाई जापान पनि यहीँ, मलाई बेलायत नि यही ! गायक पशुपति शर्माको यो गितले भने जस्तै अहिले कञ्चनपुरका एक युवा आफ्नै व्यवसायमा रमाइरहेका छन् ।...
टीभीको समाचारबाट प्रभावित भई फूल खेती गर्दा मालामाल
२०७७ भदौ २१ गते २०:५३
झापाको विर्तामोड नगरपालिका–९ निवासी लक्ष्मीमाया अधिकारीले सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती गरेको अढाई वर्ष भयो । उनले फूलखेती गरेरै आफ्नो परिचय फेरेकी छन् । परिचयसँगै उनको जीवनशैलीसमेत फेरिएको छ । गाउँ समाजमा लक्ष्मी दिदी भन्नेहरु अहिले उनलाई सम्मान र माया गदै ‘फूलमाया’ भन्छन् । जन्मदेखि...
कसरी गर्ने बेसार खेती ? यस्तो छ बेसार खेती गर्ने तरिका
२०७७ भदौ २० गते १६:५६
परिचय बिसारलाई अंग्रेजिमा turmeric भनिन्छ। यसको बैज्ञानिक नाम कुर्कुCurcuma longa linn हो। यसको उत्पत्ती दक्षिण एसियाका देशहरुमा भएको पाईन्छ। बेसार्मा पाईने प्रमुख तत्व कुरकुमिन, एक प्रकारको रङ हो। बेसार्को गानोमा सरदर १।८ देखी ५।४% कुरकुमिन पाईन्छ। भारत, पाकिस्तान, हाईटी जमाइका, चाइना र पेरु बेसारका...
जानकीका किसान जो टमाटरबाट एक सिजनमा २० लाख कमाउछन
२०७७ भदौ १३ गते २०:५९
नेपालगन्ज । सुरेन्द्र खड्का ( गोल्डेन्स उद्भास ) बारिमा टमाटर टिप्दै आफैले सृजना गरेको ‘अर्को एउटा कुरु क्षेत्र’ कविताका हरफहरु वाचन गर्दै थिए । ‘अब तिम्रो हतियार हलो चम्कियोस कुरु क्षेत्रको मैदानमा अब सन्खकोस गरौ एक युद्द मरुभूमिको बिरुद्धमा’ ‘अर्को एउटा कुरु क्षेत्र’ कविता...
नेपाल कै कान्छी उद्यमि ओखल्ढुङ्गे
इन्दिरा खतिवडा बिक्रम सम्बत २०५८ साउन १६ गते ओखलढुंगा हालको चिसन्खुगढि गाउपालिका ७ माम्खामा...
काठमाडौं, १९ चैत । नविनतम सोचका साथ उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि नवप्रर्वतन प्रस्ताव...
चन्द्रगिरिको सेयर अर्को साताबाट कारोबार गर्ने तयारी
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ : ५० कित्ता सबैलाई
कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो रु ९०, किसानलाई घाटा
कोरोना कहर : कुखुराको मासुको मूल्य ह्वात्तै घट्यो
माग उच्च भएपछि किवी खेतीमा जुट्दैछन् इलामका किसान